Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Boka mialo-poza… !
Inty sy Nday: Boka mialo-poza… !
Ny ohja-pitenenana hoe « toy ny boka mialo-poza ka manosika azy hiverina » dia tena tranga lojika eo amin’ny fiainana andavanandron’ny zanak’olombelona. Raha boka ny olona iray hisaka foza, izany hoe tsy misy rantsan-tanana, dia tsy afaka hisarika an‘ilay foza ao anaty lava-bato mihitsy, ohatra, fa vao mainka aza manosika an‘ilay foza hiverin-dalana.
Izay tranga izay no nofidianay hitondrana fanazavana momba ny tatitry ny rafitra iray sahanin’ny manam-pahaizana momba nny fiantohanha ny fampiasam-bola (expert en assurance crédit = Coface) izay nanamarika fa « azo sokajiana ho faritra mena i madagasikara raha fampiasam-bola no asian-teny ». Izany hoe ahiana sy tsy azo antoka fa mety ho very vola fotsiny ianao raha any Madagasikara no hampiasa izany. Ny antony isan’ny navoitran’ny Coface amin’izany dia ny fifandroritana politika misy eto sy ny fihanahan’ny kolikoly.
Azo itondrana fanazavana tsara izany.
Ny fifandroritana politika aloha dia tokony tsy ho olana satria tsy misy ady politika mitana basy na manao herisetra mifanafika amin’ireo mpifaninana politika. Henjana rahateo ny fanakendana ataon’ny mpitondra amin’izay tre haneho hevitra. Ny marimarina kokoa angamba dia ny fanamparam-pahefana ataon’ny tompon’andraiki-panjakana amin’ireny mpampiasa vola ireny ho tsy maintsy manohana ny hetsika politika ataony. Fahita izany fa mihorohoro mihitsy ireo karana mpandraharaha sy mpanao bizina eto isaky ny miantso an-telefaona azy ireo ny mpitondra. Tsy maintsy fangataham-bola no vontoatiny.
Ny tranga iray mety azo ampifamatorina amin’ny politika angamba, izay ny tsy fahombiazan’ny mpitondra no tena antony, dia ny tsy fisian’ny fandriampahalemana ka tsy misy antoka ho an’ny rehetra momba ny fiarovana ny aina sy ny fananan’ny tsirairay.
Fa ny fihanahan’ny kolikoly kosa dia fositra goavana.
Raha vao hangataka alalana hisehatra amin’ny tontolon’ny fandraharahana eto ianao, dia efa takian-dry zalahy manam-pahefdana volabe ho sandan’ny soniany. Kolikoly izany. Fa mbola kolikoly koa ny tsy fahafahan’ny mpandraharaha mahazo antoka amin’ny olana ikatsahana fanelanelanana eny amin’ny fitsarana.
Eo amin’ny tontolo ara-pandraharaha sy fampiasana vola dia tsy ilaozan’ny olana ka na misy aza ny fanomezan-dalana avy amin’ny lalàna momba ny fahafahana manao raharaham-pihavanana na « transaction », dia matetika misy ny fanararaotan’ny sasany ny fahefana ananan’ny olona akaiky azy na namany, ka lelavolabe no lasa takiana amin’ireo mpandraharaha..
Sy ny maro tsy ho voatanisa e !
Tsy mahagaga, noho izany, raha misy izay fanasokajiana an’i Madagasikara ho firenena mahabe tebiteby sy ahiahy amin’ny tontolon’ny fampiasana vola, ka tsy manome faharisihana ny mpanambola ho avy hampiasa ny volany eto.
Ka inona no ifandraisan’izany amin’ny ohabolana hoe « boka mialo-poza » angaha, hoy ianao?
Miezaka miteny sy mikabary ary manao izay fomba rehetra anentanana sy andresena lahatra ary isintonana ireo mpanam-bola any ivelany (eny na ny eto antoerana koa aza) mba hampiasa vola eto, hanangana orin’azsa, hamorona asa ho an’ny tanora… ny fitondram-panjakana. Tsy araka iozany anefa no mitranga satria ireo notanisaina etsy aloha irteo dia ny mpitondra fanjakana no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fihanahan’ireo sy ny fahazoan’izany olana rehetra izany vahana. Nahoana ? Noho ny tsy fahaizany mitantana sy ny fanamparam-pahefana fanaony, ary ny tsy fahombiazany amin’ny ankapobeny.